Ireo teratany vahiny avy any Inde izay sendra ny mpanao gazetinay ny tapany maraina, teny Analamahitsy, mahakasika ny fakana an-keriny dia samy nilaza fa nilamindamin-dratsy izany tato ho ato raha mitaha amin'ireo taona maro teo aloha, na dia vao tamin'ny herinandro lasa aza no nisy nikasa haka takalonaina ny naman'izy ireo raha iny niala avy tao amin'ny toeram-pivavahana iny tao aza fa avotry ny mpitandro ny filaminana. Niangavy ny tsy hotononina anarana izy ireo noho ny tahotra ny tsy fandriampahalemana hatrany. Midika izany fa tsy foana fa nihena ny fakana takalon'aina teratany karana ary mbola mandry andriran'antsy izy ireo. Tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny fanombohan'izao fitondram-panjakana mijoro izao no nahazo vahana izany, ankoatra ireo vola be natao avotraina ho an'ireo azo an-keriny, tsy vitsy ireo naratra na maty mihitsy aza. Nankasitraka ny ezaky ny mpitandro filaminana sy ny finiavan'ny fitondrana izy ireo amin'izany famongorana ny kidnapping izany, tsy ho an'ny vahiny ihany fa ho an'ny teratany Malagasy ihany koa.